कोरोना भाइरसबाट विदेशमा यो साता थप ३ जना नेपालीको निधन, खोप लगाएपछि के हुन्छ ? « Artha Path
कोरोना भाइरसबाट विदेशमा यो साता थप ३ जना नेपालीको निधन, खोप लगाएपछि के हुन्छ ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट विदेशमा यो साता थप ३ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार यो साता यूएईमा २ र पोर्चुगलमा १ जनाको संक्रमणबाट निधन भएको हो । यो सहित २१ देशमा कोरोना संक्रमणले निधन हुने नेपालीको संख्या ३ सय ३९ जना पुगेको छ ।